अनमोलसँग किन हुन्छन् क्रेजी ? यसो भन्छन् नायिकाहरु... - HKNepal.com - First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
अनमोलसँग किन हुन्छन् क्रेजी ? यसो भन्छन् नायिकाहरु…
नेपाली फिल्मका लागि अनमोल केसी अहिलेका सर्वाधिक स्टार भ्यालु बोकेका हिरो हुन्। त्यसो हुनुमा उनलाई चर्को रुचाउने फ्यान र खासगरी युवती जमात कारक छन्।
उनले भने, रोमान्स फिल्मा नै गरिरहेको छु । रियल लाइफमा खासै मौका पाएको छैन । व्यस्त पनि भइरहेको छु । आशा गरौं, आफूले सोचेजस्तो केटी छिट्टै पाउँ।
तर, अनमोल भने प्रमको मामिलामा केही अनुदार सुनिए । लभलाई चाइनिज मोबाइलसँग तुलना गर्दै उनी भन्छन्, जसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । छिट्टै फुट्न पनि सक्छ । जे पनि हुन सक्छ। कान्तिपुर(कोशेली)मा यो खबर छ।